ကြော်တတ်တယ်..လှော်တတ်တယ် (အပိုင်းတစ်) – Nya Hmwe Pann
Nya Hmwe Pann
အော်ကြီး လေထဲမှာ လွင့်မျောနေ သည် . .။ အမှောင်ထု က ကြီးစိုးနေ သည် . .။ ငါ အိပ်မက်များ မက်နေလေ သလား ထင်နေ သည် ..။ အသံတွေ ကြားလာရ သည် . .။ ဘာသံတွေလဲ..။ ဘယ်က အသံတွေလဲ ..။ သူမသိ ။ သီချင်းဆိုသံတွေလား ..။ အလင်းရောင်တခု ကို တွေ့လိုက်ရသလိုဘဲ ..။ ဒီအလင်းရောင်ဆီကို သူ ကြိုးစားပြီး အရောက်သွား သည် ..။ တော်တော် နဲ့ မရောက်နိုင်ဘူး..။ အမှောင်ထုကြီးထဲ သူ စုံးစုံးမြုပ်သွားရ ပြန် သည် . .။ အပြာရောင် ၀တ်ရုံပွပွများ ရဲ့ ကျောမှာ CSU ဆိုတဲ့ အဖြူရောင် စာလုံး များ နဲ့ လူတစု မေထိန် နဲ့ စံစံ့ တိုက်ခန်း မှာ ဓါတ်ပုံရိုက် ..လက်ဗွေယူ နဲ့ အလုပ်၇ှုပ်နေကြ သည် . .။ မုဒိန်းအကျင့်ခံလိုက်ရသော မေထိန် သည် ဆေးရုံမှာ ဆေးစစ်ခံနေရ သည် ..။ စံစံ့ ကို NYPD စာလုံးအဖြူရောင်များ ရေးထိုးထားတဲ့ အပြာရင့်ရောင် ၀တ်စုံများ နဲ့ နယူးရောက် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲ နဲ့ စုံထောက် အရာ ရှိများ မေးခွန်းထုတ်နေကြ သည် ..။
ဆေးရုံ ခွဲစိတ်ခန်း အပြင်ဘက်မှာ ကိုကျင်စွမ် အပါအ၀င် မြန်မာတစု စိတ်ပူပန်လျက် ထိုင်စောင့်နေကြ သည် ..။ အော်ကြီး ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက ကျည်ဆံ ကို ခွဲစိတ် ထုတ်ယူပြီးပြီ..အခြေအနေ ကောင်းကြောင်း..ခွဲစိတ်ခန်း က ဆရာဝန် က ထွက်ပြော သည် ..။ အော်ကြီး ကို ပစ်တဲ့ သေနတ်က ကယ်လီဘာသေးတဲ့ ပွိုင့်၃၂ ဖြစ်နေပြီး ..အချိန်မှီလဲ ခွဲစိတ်ကုသနိုင်တာကြောင့် အော်ကြီး အခုထိ အသက်ရှင်နေသေး ကြောင်း ရှင်းပြသည် ..။ ကိုကျင်စွမ် သည် ဖြစ်ပျက်သွားတာများကို မယုံကြည်နိုင် ..။
အော်ကြီး ရုတ်တရက် မခေါ်ဘဲ ရောက်သွားပြီး စံစံ နဲ့ မေထိန့်ကို ကယ်တင်လိုက်တာလဲ အံ့သြနေ သည် ..။ မေထိန် ပြောပြတာက သူ ၀ိုင်သောက်ထားတဲ့ အ၇ှိန်လေးနဲ့ ရီဝေေ၀ ဖြစ်ပြီး သူမ အခန်းကို တံခါးဖွင့် ၀င်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အနောက်က လူနှစ်ယောက်က သူမ ကို ဆောင့်တွန်းပြီး အတင်း အခန်းထဲ လိုက်ဝင်လာ ပြီး သူမကို ရိုက်နှက်ခါ အိပ်ခန်းထဲ ဆွဲခေါ်သွားကာ ကျင့်ကြံ သည် ..။အော်ကြီး ၀င်လာပြီး သူမကို ကျင့်တဲ့ လူမဲကို ဘေ့စ်ဘော်လ်တုတ် နဲ့ ၀င်ရိုက်တော့ သူမ အရမ်း အံ့သြ တုန်လှုပ်သွား သည် ..။ အော်ကြီး ဘယ်က ဘယ်လို ရောက်လာသလဲ သူမ မသိဘူး ..။ အော်ကြီး သတိရလာ သည် ..။ ပထမဆုံး ..သူ မျက်လုံး ပွင့်လာတဲ့ အချိန် သိလိုက်တာက သူ ဆေးရုံတခုရဲ့ အခန်းတံခန်းထဲ ရောက်နေ သည် .။ ဆေးရုံကုတင်ပေါ်မှာ ..။
သူ့ကို အပြုံးလေး နဲ့ သတိရလာပြီလားလို့ အင်္ဂလိပ်လို မေးလိုက်တဲ့ သူနာပြုဝတ်စုံ ၀တ်ထားသော မျက်လုံးပြာပြာနဲ့..မျက်နှာဖြူမလေး ကို သူ ခေါင်းငြှိမ့်ပြမိ သည် ..။ သူ ချက်ချင်း မှတ်မိလိုက်တာ က သူ သေနတ်ထိတာကိုဘဲ ..။ သူ့လက်မှာ ပိုက်တန်းလန်းတွေ ရှိနေဆဲဘဲ ..။ ရင်ဘတ်ကတော့ ဘာမှ မနာဘူး ..။ သူနာပြုဆရာမလေး အခန်းပြင်ကို ထွက်သွား သည် ..။ အော်ကြီး မျက်လုံးပြန်မှိတ်ထား သည် ..။ ခြေသံကြားလို့ မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့ မိန်းမချောလေးတယောက် ..။ စောစော က သူနာပြုလေး မဟုတ်ဘူး ..။ နောက်တယောက် ..။ ဒီတယောက် က တ၇ုတ်လား..မြန်မာလားတော့ မသိသေး ..။ အာရှသူ ချောချောလေး ..။ သူမ အနောက်မှာ သူ့ဘော်ဒါကြီး ကိုကျင်စွမ် ..။
၀မ်းသာနေတဲ့ သူ့မျက်နှာကြီး က ပြုံးနေ သည် ..။ “ သတိရလာပြီ လား ..ခုလို ပြန်သတိရလာတာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ် ..ငါ က နယူးရောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှုခင်း စုံထောက် နာတာရှားကွမ်း ..ပါ..မင်း အမှုကို ကိုင်တွယ်တဲ့ စုံထောက်အရာရှိ ပါ…” အော်ကြီး သူမ ရင်မို့မို့ က NYPD ဆိုတဲ့ စာလုံး ပါတဲ့ ကပ်ပြားလေး ကို သတိထား မိလိုက် သည် ..။ “ မင်း က မုဒိန်းကျင့်တာကို အသက်စွန့်ပြီး ၀င် တားဆီး ကာကွယ်တာမို့..မင်းကို ဘာမှ အမှု မလုပ် တရားမစွဲပါ ဘူး ..ငါက ဖြစ်ပျက်တာတွေကိုတော့ မှတ်တမ်းရေးရမှာမို့ ..မင်းကို ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ မေးခွန်းတွေ မေးရ လိမ့်မယ် ..”း ပြန်သွားသည် “အိုကေ ..” အော်ကြီး ခေါင်းငြှိမ့်ပြ သည် ..။ နာတာရှားကွမ်း မေးတာများ ကို သူ ကြိုးစားပြီး ဖြေ သည် ..။ တချို့မေးခွန်းတွေ ကို သူ သိပ် နားမလည်တော့ အနီးက ကိုကျင်စွမ်က ဘာသာပြန်ပေး..စကားပြန် လုပ်ပေး သည် ..။
နာတာရှားကွမ်း က သူ့ကို “ ဟီးရိုး ” ယောက် လို့ ချီးကျူးစကားပြောကာ နောက်မှ လာတွေ့အုံးမည် ဆိုပြီး နုတ်ဆက်ခါ ပြန်သွား သည် ..။ သူ့ဆေးရုံခန်းထဲက ပြန်ထွက်သွားသော နာတာရှားကွမ်း ရဲ့ အောက်ပိုင်း နောက်ပိုင်း အလှ ကို အော်ကြီး ငေးမောနေ သည် ..။ “အဟမ်း..အဟမ်..” ကိုကျင်စွမ် ရဲ့ ချောင်းဟန့်သံကြောင့် အော်ကြီး သတိဝင်လာ သည် ..။ ရဲစုံထောက်မ နာတာရှာကွမ်း ရဲ့ တုန်ခါသွားတဲ့ တင်သားတွေ ကို ငေးနေမိတဲ့ သူ့ အဖြစ်ကို ကိုကျင်စွမ် က ခေါင်းခါနေ သည် ..။ “အင်း ..ဆေးရုံပေါ်မှာ ပိုက်တန်းလန်း နဲ့ ပက်လက် ဖြစ်နေတာတောင် ..စိတ်က ရှိနေသေးတယ်နော်..ဒါကြောင့် လဲ ယောင်္ကျားတွေဟာ ဖွဲတဆုတ် နိုင်တဲ့အထိ စိတ်ရှိနေကြတယ်လို့ ပြောကြတာ နေမယ် ..” မေထိန် သည် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ အတွေ့အကြုံများကြောင့် စိတ်ဝေဒနာ ရ၇ှိနေ သည် ..။ စံစံကတော့ မေထိန်လောက် မဆိုး ..။မေထိန်က တကယ် အကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ သူကိုး ..။ မေထိန် က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ သူမ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းမှာ မနေလိုတော့ ..။
မုဒိန်းကောင်လူမဲများ သေခဲ့တဲ့ အခန်း ဖြစ်သလို သူမ ကို အတင်း ကျင့်ကြံခဲ့တာ ကို အမြဲလို ပြန်မြင်ယောင်နေ သည် ..။ စုတ်ပြတ်ပြတ် လူမဲကပ္ပလီများ မြင်ရင်လဲ..အလကားနေရင်း လန့်နေ သည် ..။ မေထိန် ..စံစံ နဲ့ သက်ထားတို့ ..အော်ကြီး ကို ဆေးရုံမှာ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြ သည် ..။ အော်ကြီး ကို သူတို့ အစစ တာဝန်ယူ ပြုစုကြ သည် ..။ ကိုကျင်စွမ်ကြီး လဲ အော်ကြီး ကို အထူး ဂရုစိုက် သည် ..။ မေထိန် နဲ့ စံစံ လဲ ညည အိပ်မပျော်ကြဘူး ..။ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက် ပြီး ကြောက်စိတ်တွေ ကြောင့် မအိပ် ဘဲ ထိုင်နေရတဲ့ ညတွေ များလာ သည် ..။ စိတ်ရောဂါ ဆရာဝန် နဲ့ တွေ့ဆုံ တိုင်ပင်ကြည့်ရ သည် ..။ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ကို ဆေးသုတ် ..လိုတာ ပြုပြင်ပြီး ပြန်ရောင်းဖို့ အိမ်ပွဲစား လက်ထဲအပ်လိုက် ပြီး သူမ နဲ့ စံစံ သည် လတ်တလော သက်ထား နဲ့ သွားနေကြ သည် ..။
မေထိန် သည် ဆိုင်အလုပ်လဲ ပြန်မလုပ်ချင်သေးလို့ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန် ရဲ့ အကြံပေးချက် အရ စံစံ နဲ့ မြန်မာပြည် ကို သွားဖို့ စီစဉ်လေ သည် ..။စိတ်ရောဂါဆရာဝန် က ခရီးဝေးဝေးတခု ကို သွားဖို့..အေးချမ်းတဲ့ တနေရာမှာ အနားယူဖို့ ပြောလို့ မြန်မာပြည် ပြန်ပြီး ..ပြင်ဦးလွင်မှာ သွားနားဖို့ လုပ်ကြတာ ဖြစ် သည် ..။ ကိုယ့်ကိုယ် နဲ့ စိတ် ကျန်းမာရေး အတွက် ဦးစားပေးလိုက် သည် ..။ သက်ထားကလဲ သဘောတူ သည် ..။ ဆိုင် ကို ခဏပိတ်ထားလိုက် သည် ..။ မေထိန် နဲ့ စံစံက သက်ထား ကို အော်ကြီး ကို အထူးဂရုစိုက် ကြည့်ရှု ဖို့ မှာကြ သည် . .။ မေထိန် နဲ့ စံစံ မြန်မာပြည် ထွက်သွားပြီးနောက် အော်ကြီး လဲ ဆေးရုံက ဆင်း သည် ..။ သက်ထားလဲအော်ကြီး နေကောင်း မှ ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ စိတ်ကူး သည် ..။ လတ်တလော အော်ကြီး ကို ကိုကျင်စွမ် ရဲ့ တိုက်ခန်း မှာ နားခိုင်းထား သည် ..။ အော်ကြီး နေကောင်းလာပြီ ..။ တိုက်ခန်းပေါ်မှာချည်း မနေနိုင်တော့ ..။
ပန်းခြံထဲ လမ်းလျောက် သည် ..။ သူ့သေနတ်ထိထားတဲ့ ဒါဏ်ရာ လုံးဝ သက်သာပျောက်ကင်းနေပြီ ။ အလုပ်ပြန်လုပ်ချင်ပြီ ..။ သက်ထား ကို ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ ပြောအုံးမည် လို့ သူ စဉ်းစားနေ သည် ..။ သက်ထား မေထိန် နဲ့ စံစံ မြန်မာပြည် သွားနေချိန် စတုန်း က အဆက်အသွယ် မလုပ်တော့လို့ စိတ်ထဲ ခံစား နေရ သည် . .။ ရီးစားကွဲတာ မဆန်းပါဘူး လို့ သူမဖါသာ စိတ်ဖြေပေမဲ့ ..အလုပ်ကလဲ မရှိတော့ ..အရက်သောက် ဖြစ်နေ သည် ..။ ဘားထဲမှာ ထိုင်ပြီး ..အရက်သောက် ရင်း..တော်တော်မူးနေတော့ မေထိန် ဖြစ်ပျက်သွားတာ သတိရပြီး သူမ အပြန် လူဆိုး လိုက်လာနိုင်တာ စဉ်းစားမိပြီး ..အော်ကြီး လဲ နေကောင်းနေပြီ ဆိုတာ သတိရလိုက် သည် ..။ အော်ကြီး လဲ ဆိုင်ပိတ်ထားလို့ အားနေ သည် ..။ ကိုကျင်စွမ် အိမ်က ဖုန်း ကို ဆက်ကြည့်လိုက် သည် . . ။
အော်ကြီး ဖုန်းထူး သည် . .။ “ အော်ကြီး..သက်ထား ပါ ..အော်ကြီး ဘာလုပ်နေလဲ ..” “ ဘာ ရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး..တီဗီကြည့်လိုက် ..စာဖတ်လိုက်ပါဘဲ..” “ အားရင် သက်ထား ဆီ လာခဲ့နိုင်မလား ..နေကောင်းတယ် မှုတ်လား…..” “ ရတယ်လေ ..ဘယ်ကို လာရမလဲ …” သက်ထား က သူမ ရောက်နေတဲ့ ဘား ကို ပြောပြ သည် ..။ အော်ကြီး ချက်ချင်းဘဲ အ၀တ်စားလဲပြီး တိုက်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ သည် . .။ လမ်းလျောက်သွားရင် ကြာနေမှာစိုးလို့ တက်ဆီ တားလိုက် သည် . .။ သက်ထား ရောက်နေတဲ့ နေရာ ကို သူ အရင်က ကိုကျင်စွမ်တို့ နဲ့ ရောက်ဘူး သည် ..။ သူရောက်သွားတော့ သက်ထား သည် ဆက်သောက်နေတုံး ဘဲ ..။ သက်ထား အရမ်းမူးနေ သည် ..။ “ သက်ထား ..ပြန်မယ် မှုတ်လားဟင် ..” “အင်း..ပြန်မယ် ..အော်ကြီး ကို စောင့်နေတာ ..ဟင်းဟင်း..အော်ကြီးလဲ နဲနဲလောက် သောက်ပါလား ..” “ မသောက်တော့ဘူး..သက်ထား ..ကျနော် ဆေးရုံတက်လိုက်ရလို့ အခု ဆေးလိပ်တောင် ပြတ်နေပြီ ..” “အိုး..ကောင်းတာပေါ့..အော်ကြီး ..ဆေးလိပ်က လူအတွက် မကောင်းဘူး ..” သက်ထား သည် လမ်းတောင် ကောင်းကောင်း မလျောက်နိုင်လို့ အော်ကြီး က တွဲပေးရ သည် ..။ လမ်းမပေါ်ကို ရောက်သောအခါ အော်ကြီး တက်ဆီ ခေါ်လိုက် သည် ..။
“အော်ကြီး..ကိုကျင်စွမ် ရှိနေလား ..” “ မရှိဘူး..သက်ထား ..သူ ၀စ်စ် ကွန်းဆင်း ခဏ သွားတယ် ..သူ့အကိုဆီကို ..” “အော်..အော်ကြီး တယောက်ထဲပေါ့..” “ ဟုတ်တယ် ..ကျနော် လဲ ပျင်းလာပြီ သက်ထား ..သက်ထား ဆိုင် ပြန်ဖွင့်ချင်ရင် ဖွင့်လေ ..ကျနော် နေကောင်းနေပြီ ဘဲ..” “ အင်း..လုပ်ကြတာပေါ့ ..အော်ကြီး တယောက်ထဲ နိုင်ပါ့မလား..စံစံ လဲ မရှိဘူး ..” “ ရပါတယ် ..လူလိုရင် ဆူရှီသမားတွေထဲက ချက်တတ်တဲ့ လူတွေ ရှိတယ်..ကျနော် ခဏ အကူတောင်းပြီး ခေါ်ထားလို့ ရတယ် . .” သက်ထား ရဲ့ တိုက်ခန်း ကို ရောက်ပြီ ..။ သက်ထား သည် အရမ်းမူးနေလို့ အခန်း ၀င်ဝင်ချင်းနေရာ ဆိုဖါမှာ လှဲချပြီး အိပ်လိုက် သည် ..။ “သက်ထား ..ဒီမှာ မအိပ်နဲ့လေ..အိပ်ခန်းထဲမှာ သွားအိပ် . .”းး အော်ကြီးက ဆွဲထူ သည် . .။ “အော်ကြီး ..ဒီည မပြန်နဲ့တော့..သက်ထား အခန်းမှာဘဲ အိပ်လိုက် ..” “ သက်ထား အိပ်ပျော်သွားရင် ကျနော် ပြန်လိုက်မယ်လေ…” “ နိုး…နိုး …မပြန်နဲ့..သက်ထား တယောက်ထဲ မနေချင်ဘူး ..ဟိုလေ . .အော်ကြီး က သိပ်နှိပ်တတ်တယ်လို့ စံစံ တို့က ပြောတယ် ..သက်ထား လဲအနှိပ်ခံချင်တယ် ..နှိပ်ပေးမလား ..” “ ဟုတ်ကဲ့ ..သက်ထား ..လန်းဆန်း သွားအောင် ..သက်ထား ရေချိုးလိုက်ပါလား ..”း ထူပေး “ အင်း…ချိုးမယ် ..မထနိုင်ဘူး..အော်ကြီး..ထူပေး ..” သက်ထား သည် အော်ကြီး ကို တွဲပြီး ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်ခဲ့ သည် ..။
အရက်အ၇ှိန် နဲ့ သက်ထား စိတ်တွေ က ဖေါက်ပြန်လာ သည် …။ အော်ကြီး သည် ဇရှိတဲ့ လူ ဆိုတာ သက်ထား သိ သည် ..။ ဆိုင်မှာ အတူတူ လုပ်ကြစဉ်..သက်ထား တင်ပါးတွေ ကို တပ်မက်တဲ့..မျက်လုံးတွေ နဲ့ ခိုးခိုးကြည့်နေတတ်တာ..သက်ထား သိ သည် ..။ လတ်တလော စတုန်း နဲ့ကလဲ ပြတ်သွားပြီး ဘဲ မရှိတော့ သက်ထား ..ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေ သည် . .။ အော်ကြီး ကိုလဲ သက်ထား ..တောင့်တောင့်တင်းတင်း နဲ့ ယောင်္ကျားပီသ လို့ သဘောကျပေမဲ့ ကိုယ် ခန့်ထားတဲ့ အလုပ်သမားမို့ ဆင်ခြင်ပြီး နေခဲ့တာ ..။ အခုလို အရက်ကလဲမူးနေ..ဆိတ်ကွယ်ရာ နေရာမှာ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတော့ သက်ထား ..စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန် ပြီး..အော်ကြီး နဲ့ ကဲပစ်လိုက်ချင်လာ သည် . .။ အော်ကြီး သည်လဲ သက်ထား ရဲ့ စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးတွေ ကို အမြဲ ခိုးကြည့်ကြည့်ပြီး ပြစ်မှား သဘောကျနေသူ ဖြစ် သည် ..။ သက်ထား သည် ကိုယ်လုံး အရမ်းလှတာ စတွေ့တဲ့နေ့ထဲက အော်ကြီး သတိထားမိ ခဲ့တာ ပါ ။ သက်ထား ကို ကာမစပ်ရှက်လိုက်ရ ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးရိုင်းတွေ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့မိတာ အ ခါခါ ပါဘဲ ..။ အခု သက်ထားကို အရက်ဆိုင် က ထွက်ကထဲက တွဲခေါ်ခဲ့ရပြီး တက်ဆီကားထဲမှာလဲ သူ့အပေါ် မှီထားသောအခါ သက်ထား ရဲ့ ဖြိုးကြွသော ရင်သားစိုင်အိအိ တွေက သူ့ ကို ဖိနေထိနေခဲ့ သည် ..။
အခုလဲ ရေချိုးခန်း ကို တွဲပို့ရတော့ ဖက်မိကိုင်မိ..ထိမိ နေ သည် ..။ ဖိုနဲ့မ ..အ၇ွယ်ကောင်းသူတွေ..ဆိတ်ကွယ်ရာ အခန်း တခုထဲ ဖက်မိပွေ့မိနေတော့ စိတ်တွေ နိုးကြားဖေါက်ပြန်လာရတာ သဘာဝ ဘဲလေ ..။ အော်ကြီး ရဲ့ ဖွားဘက်တော်ကြီး နိုးထနေတော့ သူ့ဘောင်းဘီရှေ့မှာ ငေါငေါကြီး ဖုထွက်နေပြီ ..။ သက်ထား လဲ မူးသာမူး..ဒါကြီး ငေါနေတာ မြင် သည် ..။ ပိုပြီး မူးဟန်ဆောင်လိုက် သည် ..။ “အော်ကြီး…အ၀တ်တွေ ချတ်ပေး…” “ ဗျာ …” “သက်ထား မူးနေလို့ မချွတ်နိုင်တော့ဘူး..ချွတ်ပေး..ရေချိုးပေး …” “ဖြစ်..ဖြစ်ပါ့မလား ..သက်ထား ရယ် . .” “ဖြစ်တယ်..ဘယ်သူမှ သိတာမှ မဟုတ်တာ ..သက်ထား နဲ့ အော်ကြီးဘဲ သိတာလေ ..” “ကျ..ကျ..ကျနော် …” “လုပ်မနေပါနဲက အော်ကြီး ရယ် ..ရှင် အမြဲ ကျမ ကို ကြည့်ကြည့်ပြီး ထန်ထန်နေတာ..သိတယ် …” “ဟာ..သက်ထားကလဲ..” “ဟုတ်တယ်လေ ..ခုလဲကြည့်..ရှင့်ဟာကြီး ထောင်မာနေပြီ မဟုတ်လား..ဒီမှာ…..” ပြောပြောဆိုဆို သက်ထား ရဲ့ လက်က အော်ကြီး ဘောင်းဘီရှေ့ ငေါနေတဲ့ အဖုကြီး ကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပါ သည်။
“ အာ..သက်ထား …” “ ဟွန်း..မာတောင်နေတယ် ..ကဲ..အ၀တ်တွေ ချွတ်ပေး..ယူလဲ ချွတ် ..” အော်ကြီး စိတ်ထဲမှာ .ကုလား ဘုရားပွဲ လှည့်တဲ့အခါ တီးတဲ့ ဗုံသံတွေ ဆူညံနေပြီ ..။ ဒိန်းတပ်တပ်..ဒိန်းတပ် တပ် နဲ့..။ တုန်ရီတဲ့ လက်တွေ နဲ့ သက်ထားရဲ့ အ၀တ် တွေ ကို သူ ချွတ်ပေးနေ သည် ..။ ဒီလိုကြုံလာလိမ့်မယ်လို့ယောင် လို့တောင် အိပ်မက် မမက်ဘူးဘူး ..။ အော်ကြီး စိတ်ထဲမှာ..ငါတော့ စားရကံကြုံလို့ မုတ်ဆိတ် ပျားစွဲပြီ ..ဆိုပြီး ၀မ်းသာလုံးဆို့နေ သည် ..။ အသက်ပင် ၀၀ မရှုနိုင် ..။ သက်ထား ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာ ၀တ်ထားတာ ကို ပထမဆုံး ချွတ်လိုက်တော့ သေးမျှင်တဲ့ ရင်စည်း အနက်လေး က အတင်းချုပ်နှောင်ထားလို့ ရုန်းကန်ထွက်နေတဲ့ ဖြူဝင်းတဲ့ ရင်သားတွေ ရဲ့ အပေါ်ပိုင်း ကို တွေ့လိုက်ရတယ် ဆိုရင်ဘဲ အော်ကြီး ..တောဆင်ကြီးတကောင် မုန်ယိုသလို ..ကာမစိတ်တွေ တဟုန်ထိုး ထကြွလာရတော့ သည် ..။ သက်ထား သည် ရေချိုးခန်း နံရံ မှာ ကျောမှီထားရာက အော်ကြီး ကို ကျောခိုင်းလိုက်ပြီး နံရံ ကို မျက်နှာမူပေးလိုက် သည် ..။ ရင်စည်းလေး ရဲ့ ချိတ် ကို အော်ကြီး လက်တွေ တုန်လျက် ဖြုတ်ပစ်လိုက် သည် ..။ မိန်းမတွေ အများ ကြီး နဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အခုဟာက အင်မတန်လှ..ွှအရမ်းတောင့်တဲ့ သူ့အလုပ်ရှင် ဖြစ်နေတာကြောင့် ပါ ..။ သက်ထားရဲ့ စကပ်ကို ဘေးက ဇစ်လေးဆွဲချပြီး ချွတ်ချလိုက် သည် ..။
သက်ထား သူ့ဘက်ကို လှည့််ပြီး ဖွံ့ဖြိုး တင်းမာတဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာ ကို သူ့ကို ကိုင်ခိုင်းလိုက်တော့..အော်ကြီး ..ကိုင်နယ်ရုံ မက ပါးစပ်နဲ့ စို့လေ ပြီ ..။ အောက်တွင် ..ပင်တီပါး အနက်လေး ဘဲ ရှိနေပေမဲ့ သူ မချွတ်အားသေး ..။ နို့လှလှကြီးတွေ ကို နမ်းလို့ စို့လို့ မ၀သေး ..။ “တော်တော့ကွယ် ..သက်ထားတို့ေ၇ချိုးကြရအောင် ..အော်ကြီး က သက်ထားကျောကို ချေးတွန်းပေးမလား ..” ပင်တီ အနက်လေး ကို သက်ထား က သူမ ဖါသာဘဲ ချွတ်ပစ်လိုက် သည် . .။ အို ..လှလိုက်တာ သက်ထား …ရယ် …။ တြိဂံပုံ ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီး ရဲ့ ထိပ်ဖက်မှာဘဲ အမွှေးစုစုလေး ရှိနေပြီး ကျန် နေရာတွေမှာ ရှင်းပြောင်သန့်နေလို့…အက်ကွဲကြောင်း နီညိုညိုလေး က ထင်းနေ သည် ..။ “အော်ကြီး..အ၀တ်တွေ ချွတ်လေ ..ဘာကြောင်နေတာလဲ ..” “ အဟီး..လှလို့ …” “ ဘာလှတာ လဲ….” “ သက်ထား ..ဟိုဒင်း …. ” သက်ထား က တခစ်ခစ် ရယ် သည် ..။ေ၇ပန်း ကို ဖွင့် သည် ..။
တဝေါဝေါ ကျနေတဲ့ ရေပန်းအောက်ကို ၀င် သည် ..။ အော်ကြီး လဲ သူ့အ၀တ် အစားတွေ ကို ချွတ်လိုက် တော့ ပေါင်ဂွဆုံက အ မွှေးဖွားဖွားကြားက မတ်မတ် ကြီး ထောင်နေသော သူ့လိင်တန်ညိုညိုကြီး ကို သက်ထား တွေ့မြင် သွားရ သည် ..။ “လာလေ..အော်ကြီး….” အော်ကြီး လဲ သက်ထား ရှိရာ ရေပန်းအောက် ကို ၀င်လိုက် သည် ..။ အငမ်းမရ ဘဲ သက်ထား နှုတ်ခမ်းတွေကို သူ က စုတ်နမ်း သလို သက်ထားကလဲ သူ့ခါးကို တအားဆွဲဖက်ပြီး တုံ့ပြန် စုတ်နမ်းလေ သည် ..။ သက်ထား ရဲ့ဖွံ့ထွားသော ရင်သားစိုင်တွေ ကိုလဲ သူ အားရပါးရ ဆုတ်နယ်မိ သည် ..။ သက်ထား ရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ ကို လဲ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်တွယ်မိ သည် ..။ သက်ထား ရဲ့ လက်တဖက် က သူ့ လိင်တန် တုတ်တုတ်ကြီး ကို ဆုတ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ် နေ သည် ..။ နှစ်ယောက် စလုံး ..စိတ်တွေ ပြင်းထန်သထက် ပြင်းထန် လာတော့ ရေဆက် မချိုးနိုင်တော့ ..။သက်ထား ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲ က ကုတင်ကြီးပေါ်ကို သက်ထားနဲ့ ရောက်သွား သည် ..။ နှစ်ယောက်စလုံး ထန်နေပြီ ..။ ထန်နေတာမှ အရမ်းအရမ်း …။ ပက်ပက်စက်စက် လှနေသော သက်ထား ရဲ့ အ၀တ်မဲ့ကိုယ်ခန္ဒာ အစိတ်အပိုင်းများ က အော်ကြီး ရဲ့ ပြင်းထန်နေတဲ့ ကာမစိတ်တွေကို ပိုပို အ၇ှိန် မြင့်လာစေ သည် ..။
သက်ထား ရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို ဆွဲကား ဘယ်ဘက် လက်တဖက် ထောက် တက်မှောက်ပြီး သူ့လိင်တန်ကို် ညာ လက်နဲ့ အရင်းမှ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ..သက်ထား ရဲ့ နှုတ်ခမ်းသား ထူထူ နဲ့ အကွဲကြောင်းမှာတေ့ပြီး ထိုးသွင်းလေ သည် ..။ သက်ထားကလဲ သူ့လည်ဂုတ် ကို ဖမ်းဆွဲဖက်ပြီး သူ့လိင်တန် ၀င်လာသည်ကို မျက်လုံးလေး မှေးစင်းကာ ငံ့လင့်နေ သည် ..။ “အို ..ဟင့် ..” လိင်တန်ထိပ်ပိုင်း ၀င်သွားပြီး တင်းခံနေလို့ နောက်ပြန်ဆုတ်ခါ ပြန်သွင်း သည် ..။ အော်ကြီးး ရဲ့ လိင်တန် သည် သက်ထားအဖို့ သူမ အင်္ဂါစပ်ထဲမှာ သိသာပြည့်တင်းနေသည် ကို ခံစားရသည် ..။ အော်ကြီး ရဲ့ ဖြေးဖြေးချင်း ထိုးနှက်ချက်တွေ တချက်ချင်း ရရှိနေသည် ..။ အချက်တိုင်း က ထိမိနေ သည် ..။ သက်ထား သည် အတွေ့အကြုံမနည်းလှတော့ ..။ ယောင်္ကျား သုံးလေးယောက် နဲ့ ကြုံဘူးပြီးပြီ ..။ ဒါတောင် အော်ကြီးရဲ့ လိင်တန် က သူမ အထဲမှာ တင်းကျပ်နေ သည် ..။ ထိုးသွင်းလိုက်တိုင်း..ပြန်ဆုတ်လိုက်တိုင်း အတွင်းမှာ သိသိသာသာ ရှိလှ သည် ..။ သူ့ဟာကြီး က လုံးပတ် တော်တော်တုတ်တာဘဲ….လို့ သက်ထား တွေးနေဆဲ အော်ကြီး ရဲ့ ထိုးဆောင့် ချက်တွေ က မြန်လာ သည် ..။ ပြင်းလာ သည် ..။ “အိုး..အော်ကြီး……ဟင့်ဟင့်……” ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်…ဆိုတဲ့ အသံတွေ မြည်လာ သည် ..။ “ဘာဖြစ်လဲဟင်..သက်ထား ..နာလို့လား..” “ ဟုတ်ဘူး…ကောင်းလို့..မနှေးပစ်လိုက်နဲ့ ကွယ် ..လုပ်..လုပ် …. ” “ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဟင် …” “ဆောင့်..ဆောင့်..မြန်မြန်လေး ….ဆောင့်..” သက်ထား ခိုင်းတဲ့အတိုင်း ..အော်ကြီး က လုပ်နေကျလေ..။ အခုလဲ သက်ထား အလိုကျ အော်ကြီး ဆောင့်ပေး ပြီ . .။
မြန်မြန်လေး ဆောင့်ပေးလာ သည်…။ သက်ထား လဲ စွင့်ကားတဲ့ သူမ တင်ပါးကြီးတွေကို စကောဝိုင်း ဝေ့ကာဝိုက်ကာ လုပ်လိုက်..အော်ကြီး ထိုးဆောင့်တာနဲ့ တချိန်ထဲ..ပင့်ပင့်ပေးလိုက် နဲ့ အားတက်သရော လုပ် ပေးနေရာ..အော်ကြီး အဖို့လဲ ထူးထူးကဲကဲ အရသာ ရှိလှလို့ ..အားရပါးရကြီး ..စပ်ရှက်လေ ပြီ …။ “ ဆောင့်..ဆောင့်..တအားတအား..ဆောင့်…အီး ..ကပ်ဆောင့်..ကပ်ဆောင့်…အား …. အား…အား…..” အော်ကြီး လဲ လိင်တန်ကို တဆုံး ထည့်ထားရာကနေ အနောက်ကို တအား ပြန်မဆုတ်လိုက်ဘဲ နဲနဲသာပြန်ကြွပြီး သက်ထားအကြိုက် ကပ်ဆောင့်ပေးရာ သက်ထား ဆီးခုံ နဲ့ သူ့ဆီးခုံတို့ တဖတ်ဖတ် ရိုက်ခတ်ထိတွေ့ ပြီး သူ့ ဂွေးစိများကလဲ သက်ထား တင်ပါးကြီးတွေ ကြားကို တဘတ်ဘတ်..ရိုက်ခတ်နေလေ သည် ..။ “အင်..အင်…အင့်ဟင်..အင့်ဟင် ..ဆောင့်..ဆောင့်..အသားကုန် ဆောင့်…..အို …ဆောင့်..” သက်ထား အောက်ကနေ တင်ပါးကြီးတွေ မြှောက်ကော့ပေး၇င်း ..အော်ကြီး ဆောင့်တာတွေ ကို သဘောတွေ့ မနောခွေ့နေ သည် ..။
အော်ကြီး လဲ သက်ထား ကို ကောင်းစေလိုတာကြောင့် သူမ လိုချင်တဲ့အတိုင်း မြန်လဲမြန် အားလဲပါသော ဆောင့်ချက်တွေ ပေးနေဆဲ..“ ဖင်ကို ဆုတ်ကိုင်ပြီးဆောင့်..”လို့ သက်ထား က သူမလိုချင်တာကို တောင်းဆိုပြန်တော့ အော်ကြီးလဲ သက်ထား တင်သားကြီးတွေကို အား၇ပါးရ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ..လုပ်ပေးရ သည် ..။ ဆောင့်ထည့်နေတိုင်း..သက်ထား ရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားကြီးတွေ က တုန်ခါနေကြ သည် ..။ “ အို..အို..အို…ကောင်းလာပြီ…….ပြီးတော့မယ်..တအား..တအား……” သက်ထား ..အောက် က ပေးနေတဲ့ အောက်ပေးတွေ တအား မြန်ဆန်လာ သည် ..။ သက်ထား ပင့်ကော့ထည့်ချိန် သူကလဲ ဆောင့်ထည့်ချိန် ဆုံ လိုက်တော့ ..အီဆိမ့်အောင် ကောင်းသွား သည် ..။ သက်ထား ပြီးခါနီး ဖြစ်လာတာတွေ့တော့..အော်ကြီး …အသားကုန် ဆွဲပေး..ဆောင့်ပေး တော့ သည် …။ “အား…..အားးးအားးး…ရှီး…….အို . .. . . . . . . ” သက်ထား ခေါင်းကို ဘယ်ညာ ရမ်းခါရင်း..ခါးကိုကော့ကာ ကာမလမ်းဆုံး ကို တက်လှမ်း သွားတာ နဲ့ အော်ကြီး လဲ ဒလစပ် မနားတမ်း..ဆက်ဆောင့်ပေးရင်း ..သုတ်တွေ အချက်ပေါင်းများစွာ…ပန်းထွက်ရင်း..ပြီးဆုံးခြင်း ကို ရောက်ရှိ ရလေ သည် . . ။
သက်ထား လဲ ချွေးစို့နေတဲ့ မျက်နှာလေး နဲ့..“ယူ့ကိုတော့ သက်ထား..ခိုက်သွားပြီ..အော်ကြီး …” လို့ လေသံလေး နဲ့ ပြောလိုက် သည် ..။ သက်ထား ..အရက်မူးတဲ့ ပုံစံ လဲ မ၇ှိတော့ . . . .။ သက်ထား ရဲ့ လက်ချောင်းလေးများ က အော်ကြီး ရဲ့ ကျည်ဆံထိထားတဲ့ ရင်ဘတ်က အမာရွတ်လေး ကို ဖွဖွ လေး စမ်းကြည့်နေ သည် . .။ အော်ကြီး မှန်ကျယ်ပြူတင်းပေါက် ကနေ အောက် ကို ငုံ့ကြည့်နေ သည် . .။ ညသန်းကောင်ကျော်နေပေမဲ့ နယူးရောက်မြို့ကြီး သည် မိုးမျှော်တိုက်အမြင့်များ က မီးများ .. မီးရောင်စုံ ဆိုင်းဘုတ်များ နဲ့ လင်းထိန်နေ သည် ..။ လမ်းမပေါ်မှာလဲကားများ သွားလာနေဆဲ ပါဘဲ ..။ အော်ကြီး စိတ်ထဲမှာ အံ့သြနေဆဲ ..။ တဆင့်ပြီးတဆင့် ..မိဘမဲ့ တကောင်ကြွက်ဘ၀ ကနေ အခု ရောက်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေအထိ ..။ အော်ကြီး အတွေးတွေက အတိတ်ဆီ ကို ပြန်ရောက်နေ သည် ..။ သူသည် အတွေ့ကို မရှောင်နိုင်ခဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကို ပြန်စဉ်းစားနေ သည် ..။ သက်ထားလို ပညာတတ် မိန်းမချော တယောက် ကို သူ စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ခဲ့ရ သည် ..။
ပုံမှန်အခြေအနေဆိုပါက သက်ထားလို ပညာတတ်..ပိုက်ဆံရှိ..ရုပ်ရည်ချောတဲ့ မိန်းမတယောက် ကို သူ့လို ထမင်းချက်တယောက် က လုပ်ရဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လွယ်မလဲ ..။ စိုင်ကော်လို့ ခြုံပေါ်ရောက် ဆိုတာမျိုး ဘဲ ..။ “အော်ကြီး …. ဘယ်ရောက်နေလဲ…” အိပ်ခန်းထဲက သက်ထား သူ့ကို ခေါ်နေ သည် ..။ သက်ထား ဘာလိုသလဲ မသိဘူး ..။ သက်ထား ရှိရာ အိပ်ခန်းထဲကို သူ ၀င်သွား သည် ..။ သက်ထား သည် ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ဘေးတစောင်းလေး လှဲလျောင်း နေ သည် ..။ သက်ထား ကိုယ်ပေါ်မှာ.. စောင်ပါးပါးလေး တထည် ဖုံးပတ်ထား သည် ..။ လုံလုံခြုံခြုံတော့ မဟုတ်ဘူး ..။ သက်ထား ရဲ့ ရင်သားလုံးလုံး တဖက် တစွန်းတစ ပေါ်နေ သလို ပေါင်တန်ဖြူဖြူရှည်ရှည်တဖက် ပေါ်နေ သည် ။ “အော်ကြီး ..” သက်ထား ကုတင်ဘေး ကို သူ ရောက်သွားတော့ သက်ထား သည် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ နဲ့ ပတ်ထားး တဲ့ သူ့ကိုယ် အောက်ပိုင်း ရဲ့ အရှေ့ခြမ်း ကို လက်နဲ့ စမ်းလိုက် သည် ..။ သူ့ လိင်တန် သည် သက်ထား အစမ်းခံလိုက်ရတာနဲ့ တမဟုတ်ချင်း နိုးထလာ သည် ..။
သက်ထား သည် သူ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးးကို ဆွဲဖြုတ်ချပစ်လိုက် သည် ..။ အိပ်ခန်းထဲက မီးရောင်မှိန်မှိန် အောက်မှာ သူ့ လိင်တန်ညိုညိုကြီး သည် မကြာခင် သူကြုံတွေ့ရတော့မဲ့ ဟာတွေကို ကြိုတင်သိနေပြီလားမသိ ..။ အဆမတန် ကြီးထွား သန်မာလာ သည် ..။ ကိုယ်ထည်မှာ အကြောတွေ ထင်းထောင်လာ သည် ..။ သက်ထား က ခေါင်းထိပ်ပိုင်း ကို ပွတ်သပ်လိုက်သော အခါ ဆတ်ကနဲ လှုပ်သွားသည်။ သက်ထား က တဟင့်ဟင့် နဲ့ ရယ်မောပြီး ..“ လှုပ်သွားတယ် တော့..” လို့ ပြောပြီး လက်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်ကာ ရှေ့ တိုးနောက်ငင် ပွတ်တိုက်ပေး သည် ..။ “အော်ကြီး . .” “ဗျာ …” “ စံစံ နဲ့ ဖြစ်ဘူးလား ..” “ ဘာ…ဘာကိုလဲ..” “ ဘာကမလဲ..သိရဲ့သား နဲ့ အ သလိုလို လုပ်မနေပါနဲ့..စံစံ နဲ့ အိပ်ဖူးလားလို့ မေးနေတာ..” “ မအိပ်ဘူးပါဘူး ..” “ မေထိန် နဲ့ကော….” “ ဟား….ဘယ်သူနဲ့မှ မအိပ်ဘူးပါဘူး …” “ ဖြူသီခိုင် နဲ့ ရော …. ” “ မ..မ…မအိပ်ဘူးပါဘူး …” “ ဟုတ်လို့လား ..ဖြူသီခိုင်..ဆိုင်ကိုလာရင် အော်ကြီး နဲ့ တွတ်ထိုးနေတာ..မသိရင်ခက်မယ် ..” “ မဖြူသီ က စားစရာ အော်ဒါ မှာတာပါ ..ရိုးရိုး ပါ..” ဖြူသီခိုင် သည် သူတို့ နားမှာ ဆူရှီဆိုင် တွေ တော်တော်များများ လုပ်နေသော မြန်မာမ တယောက် ပါဘဲ ..။ စီးပွားအောင်မြင်တာကြောင့် စားနိုင်သောက်နိုင်သုံးနိုင် ပြီး သူတို့ဆိုင် က ဟင်းတွေ အမြဲ မှာစားသော မိန်းမ တ ယောက် ဖြစ် သည် . .။ အော်ကြီး နဲ့ ခင် သည် . .။
သဘောရိုး ခင်မင်တာပါ . .။ ဖြူသီခိုင် မှာ သူမ နဲ့ ညိနေ တဲ့ မြန်မာပြည် က ရောက်လာတဲ့ စောကျော် ဆိုတဲ့ ကရင်ကောင်လေး တယောက် ရှိနေကြောင်း..အော်ကြီးးသား သတင်း၇ပြီးသား ..။ အင်း..ဖြူဖြူတောင့်တောင့် ဖြူသီခိုင် ကိုတော့ စိတ်နဲ့ ပြစ်မှားမိတာတော့ အကြိမ်ကြိမ် ဘဲလေ ..။ “အော်ကြီး ..ယူ ဘယ်သူနဲ့ ဘဲ အိပ်အိပ် သက်ထား က ဂရုမစိုက်ပါဘူး ..ရောဂါတော့ မရှိဘူး မှုတ်လား ..“းး “မရှိပါဘူး..သက်ထား..ကျနော် ..ဟိုတလောလေးက ဘဲ သွေးစစ်သေးတယ်လေ ..” သက်ထား သည် ပါးစပ်က မေးခွန်းများ မေးနေချိန် လက်ကတော့ အော်ကြီး လိင်တန် ကို ကောင်းကောင်းကြီး သမ ပေးနေ သည် . .။ နယ်ပေး နေ သည် ..။ “အော်ကြီး ..” “ ဗျာ ..” အော်ကြီး ထူးလိုက်ပုံ ကို သက်ထား ရယ် သည် ..။ “ ယူ ..ဘာဂျာမှုတ်ဘူး လား…”း သက်ထား ရဲ့ မေးလိုက်တာကို ကြားရတာနဲ့တင် အော်ကြီး ဖိန်းကနဲ..ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သွားပြီး သူ့လိင်တန် က ပိုမို တင်းမာ သွားသလို ခံစားလိုက်ရ သည် .. ။ “ဟုတ်…” “ သက်ထား ကို မှုတ်ပေးမလားဟင်…” အို..။ အော်ကြီး ခေါင်း တဆတ်ဆတ် ညှိမ့်ပြ သည် ..။ ဘယ်နှယ်မေးလိုက်ပါလိမ့် ..။
ဒီက မှုတ်ချင်နေတာ..ကြာပြီ . . .။ စတွေ့ထဲ က . .။ သက်ထား က စောင်ပါးလေး ကို လှစ်ခွာလိုက် သည် ..။ ၀ှူး…သက်ထား ရဲ့ မိမွေးတိုင်း ကိုယ်တွေကို မြင်ရပြန် တော့ စောစော က မြင်ထားပြီး..လုပ်ထားပြီး ဖြစ်တာတောင်..အော်ကြီး အဖို့ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်း ထသွားရ သည် ..။ လှလွန်းလို့ ..။ သက်ထားရဲ့ ပေါင်တန်ကြီးတွေ ကြားကို သူ့ခေါင်း ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ဖေါင်းမို့တဲ့ ဆီးခုံကြီး ကို စပြီး နမ်းလေ သည် . . ။ စောစော က တချီ ပြီးဆုံးချိန် မှာ သက်ထား ဆေးကြောသန့်စင်ထားပုံရ သည် ..။ ခုံးထနေတဲ့ မုံ့ပေါင်း ကြီးနဲ့ တူသော အင်္ဂါစပ်ကြီး သည် သန့်ရှင်း နေသည် . .။ အရေကြည်လေးတွေ က အကွဲကြောင်း ရဲ့ အောက်ဆုံး မှ တင်ပါးကြားထဲကို စီးကျနေ သည် . .။ အော်ကြီး အကွဲကြောင်း ရဲ့ အောက်ဖက်ကနေ အပေါ်ကို သူ့လျာ နဲ့သိမ်း ယက်လိုက် သည် . .။ “အိုး…ဟင် . …ဟင့်…” သက်ထား ဆီက ညည်းသံ ထွက်ပေါ်လာ သည် . .။ အော်ကြီး အကွဲကြောင်းတလျောက် စုံချီဆန်ချီ ယက်ပေး လိုက် ..အစိလေး ကို လျာထိပ်နဲ့ ၀ိုင်းပေးလိုက် လုပ် ပေး နေတော့ သက်ထားလဲ တရှီးရှီးနဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ လှုပ်ခါရမ်းပြီး အော်ကြီး ဆံပင်တွေကို ဆွဲကိုင် ဆုတ်ထား သည် ..။ “အော်ကြီး..နို့တွေကို ချေပေး . .” သက်ထား ရင်သားတွေကို သူ လက်နှစ်ဖက် နဲ့ ဆုတ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်ပေးရင်း..သက်ထား ကို ဆက်ယက်ပေးလိုက် သည် ..။ အော်ကြီး ရဲ့ လျာက သက်ထား အင်္ဂါစပ် အတွင်းထဲကို ထိုးပေးလိုက် ..နှုတ်ခမ်းသားထူထူလေးတွေကို စုတ်ပေးလိုက် နဲ့ မို့ သက်ထားမှာ တအင်းအင်း နဲ့ လူးပျံ နေရပြီ . .။ “အင်….အီး…..အီး…ကောင်း တယ်..ကောင်း တယ် . .တော်…တော်ပြီ…..လုပ်ပေးတော့…လုပ်ပေးတော့…အော် ကြီး..သက်ထား လိုချင်ပြီ . . ” အော်ကြီး လဲ ဟိုးတုံးထဲက သူ လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးကို အကောင်အထည် ဖေါ်ကြည့်လိုက်မည် ဆိုပြီး ..“ သက် ထား ..ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးမလားဟင် . .” လို့ တောင်းဆိုကြည့်လိုက် သည် . .။
သက်ထား လဲ ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ အော်ကြီး လိုချင်သလို လေးဘက်ကုန်းကာ သူမ တင်ပါးကြီးတွေကို ထောင် ပေးလိုက် သည် . .။ သက်ထား သည် ဖင်ပူးတောင်းထောင် တဲ့ ပုံစံနဲ့ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းသည်လို့ အော် ကြီး ထင် သည် . .။ သက်ထား ရဲ့ တင်သားတွေ က ကုန်းလိုက်တဲ့ အခါ ပိုလို့တောင် စွင့်ကားနေသလိုဘဲ..။ တင်စိုင်နှစ်လုံးကြား က အမြောင်းလိုက်ကြီး ပြူးထွက်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီး က အရေတွေစိုကာ ၀င်းပြောင်နေ သည်။ “အော်ကြီး ..လုပ်လေ ..ဘာကြာနေတာလဲ…” “ အဟီး …လှလို့..” “ ဘာလှတာလဲ ..စောက်ပတ်လား..ဟွန်း..စောက်ပတ် မမြင်ဘူးဘူးလား ..အော်ကြီးနော် ..အသလိုလို နဲ့..” အော်ကြီး လဲ ကုတင်စပ်မှ ကုန်းထောင်ပေးထားတဲ့ သက်ထား ကို ကုတင်အောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်ရက် ကနေ ပြီး လုပ်ဖို့ သက်ထား ရဲ့ ခါးလေးကနေဆွဲကိုင်ပြီး ..ဖေါင်းကြွနေသောအင်္ဂါစပ်ကြီးထဲကိုသူ့လိင်တန်ထိုးသွင်းလိုက်း သည် . .။ “အို . .အင်း . .ကြီးလိုက်တာ..အော်ကြီး ရယ် ..တုတ်လိုက်တာ ..” “ နာလို့လားဟင်..သက်ထား . .” “ ရတယ်..ရတယ်..မနာဘူး ..” အော်ကြီး ..လိင်တန် ကြီး အဆုံးထိ ထိုးသွင်းလိုက် သည် ..။ သူ့ လိင်တန် သက်ထား အင်္ဂါစပ်အထဲ တိုးဝင်နေတာ..တန်းလန်းကြီး ဖြစ်နေတာ တွေ့နေရလို့ သူ့စိတ်တွေ ပိုပြီးထကြွရ ပြီး စပြီး အသွင်းအထုတ် လုပ် ပေးပြီ . .။“ အာ..အာ…အာ…အာ…” နဲ့ သက်ထား အသံတွေ ထွက်နေ သည် ..။
တဖြေးဖြေး နဲ့ ထိုးဆောင့်တာတွေ အော်ကြီး အရှိန်တင်လာ သည် ..။ တဖတ်ဖတ် အသံတွေ နဲ့ သက်ထား ..တရှီးရှီး တအားအား..အော်သံတွေ ဆူညံနေသည် ..။ အော်ကြီး သည် သက်ထား ကို ဆောင့်ထည့်ပေးနေစဉ် သက်ထား ရဲ့ စအိုပေါက်နီနီလေး ကိုလဲ လက်မ နဲ့ ထိုးကလိ ကစားပေးနေ သည် ..။ တနေ့ အခါအခွင့် သင့် လာရင်..ဒီခရေပွင့်လေးကိုလဲ သူ ထည့်မည် လို့ စဉ်းစားနေ သည် . .။ သက်ထား လဲ အရမ်း မြန်စေချင်လာပြီး အော်ကြီး ကို မြန်မြန်လေး ဆောင့်ပေးဖို့ ပြော သည် ..။ အော်ကြီးလဲ သက်ထား အလိုကျ ..အပီအပြင် ထမ်းဆောင်ပေးလေတော့ သည် . .။ “ကောင်းလိုက်တာ..ဆောင့်..ဆောင့်..တအား..တအား . .အို..ဆောင့်ပါ..ဆောင့်…အော်ကြီး ရယ် ..အားကုန် တအား..တအား….အို……အို…..ပြီး…ပြီးသွားပြီ…ကောင်းလှချည်လား . .” အော်ကြီး လဲ အသားကုန် ဆောင့်ပေးလိုက် သည် . .။ သက်ထား ပြီးသွား သည် . .။ နိုင်ငံခြား အပြာ ရုပ်ရှင် တွေထဲကလို သက်ထား ပါးစပ်ထဲမှာ သူ ပြီးကြည့်ချင်စိတ် ပေါက်လာပြီး…သက်ထား ကို စုတ်ပေးနိုင်မလား..မေး ရာ သက်ထားလဲ ခေါင်းညှိမ့်ပြပြီး အော်ကြီး လိင်တန် ကို အားရပါးရ စုတ်ပေးလေ သည် . .။ နဂို က ပြီးချင်နေ ပြီ ဖြစ်တာကြောင့် သက်ထား က လျာလေး နဲ့ ထိုးထိုးပြီး စုတ်ပေးတော့ သုတ်တွေ တအား ပန်းထွက်သွားလေ သည် . .။ သက်ထား လဲ ဒီလို အတွေ့အကြုံတွေ အရင်ထဲက ရှိပြီးသား ပါ..။
အော်ကြီး သုတ်ရေတွေကို မြိုချပစ် ပြီး အော်ကြီး လိင်တန်ထိပ်ဖူး ကိုပါ လျာလေး နဲ့ ယက်ပြီး သန့်စင်ပေးလိုက် သည် ..။ “ကောင်းလားဟင်..အော်ကြီး . .” “ အရမ်းကောင်းတာဘဲ..သက်ထား ရယ် . .” မေမြို့ ( သို့မဟုတ် ) ပြင်ဦးလွင် …။ မေထိန် နဲ့ စံစံ ပြင်ဦးလွင် မှာ ရောက်နေ သည် ..။ ရန်ကုန်မှာ သူတို့ တပတ်လောက်နေပြီး ..မန္တလေး ကို လေယာဉ် နဲ့ ထွက်လာကြ သည် . .။ မန္တလေး မှာ သုံးရက်လောက် နေပြီး အခု ပြင်ဦးလွင် ကို ရောက်လာတာ ဖြစ် သည် ..။ မန္တလေး မှ မေထိန် နဲ့ကျောင်းတုံးက ခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ကျော်စွာထွန်း က မေထိန် နဲ့ စံစံ ကို မန္တလေးမြို့ မှာရော မေမြို့ မှာရော လိုက်ပို့ ပြီး လိုအပ်တာတွေ အကူအညီပေး သည် . .။ ကျော်စွာထွန်း သည် မန္တလေးမြို့မှာ လဘက်ရည်ဆိုင် ဖွင့်ထား သည် ..။ လေဆိပ်မှာ ကျော်စွာထွန်း လာကြိုတော့ မေထိန် က ..“သူငယ်ချင်း ..ဘာ အလုပ်လုပ်နေလဲ ..”မေးမေမေးတော့ ကျော်စွာထွန်း က သူ လဘက်ရည်ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ် ပြောပြတုံး က မေထိန်ရော စံစံရော ..အထင်တကြီး မရှိကြ ..။
နောက် ပိုင်း ကျော်စွာထွန်း က သူတို့ကို သူ့ဆိုင် ခေါ်သွားတော့မှ သူတို့..ဖြုန်သွား ဖျားသွားကြ သည် ..။ ကျော်စွာထွန်းဆိုင် က သေးသေး မဟုတ် ..။ မနက်စောစော ကနေ ညသန်းကောင် အထိ ဖွင့်တဲ့ အ လွန် ရောင်းကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကြီး တဆိုင် ဖြစ်နေ သည် ..။ လူတွေ ပြည့်ကျပ်နေ သည် ..။ လက်မလည် အောင်ေ၇ာင်းနေရ သည် ..။ ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ ဆိုင်မှာ လာစား လာဝယ်ကြတဲ့ စက်ဘီး..ဆိုင်ကယ်တွေ ရပ်ထားတာကို က တစီတတန်းကြီး….။ လဘက်ရည်ဆိုင် လို့ နံမည် တပ်ထားပေမဲ့ ..အကုန်ရ သည် ..။ လဘက်ရည်ဆိုင်များ မှာ ရောင်းလေ့ရှိတဲ့ ပဲပလာတာ ..ပဲနံပြား..ပေါင်မုံ့ထောပတ်သုတ်..ပေါက်စီ..၀က်သားပေါင်း စတာတွေ တင်မကဘဲ အုံးနို့ခေါက်ဆွဲ..နန်းကြီးသုတ်..မုံ့တီ..မြီးရှည် ..ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ..ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ..အစုံရ သည် ..။ ဘူးသီးကြော် ..ကြက်သွန်ကြော် ..တိုဟူးကြော် ..စတဲ့ အကြော်စုံ ပါ ရသေး သည် . .။ စားပွဲထိုး အလုပ်သမားတွေ..ချက်ပြုတ်သူတွေ ကလဲ အများကြီးဘဲ . .။ မေထိန် နဲ့ စံစံ သည် ကျော်စွာထွန်းဆိုင်မှာ စားလိုတာ အကုန်ရနိုင်လို့..ကြိတ်ကြိတ်တိုး ရောင်းကောင်းလွန်းနေတာ တွေ့ပြီး အရမ်း သဘောကျသွားလေ သည် . .။ ကျော်စွာထွန်း သည် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင် လုပ်တာမို့ သူ့ညီများ နဲ့ ဆိုင်ကို လွှဲခဲ့ပြီး မေထိန် နဲ့ စံစံ့ကို ကားတစီး နဲ့ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးလေ သည် . .။ မေထိန် သည် တခါတခါ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်နေတုံးဘဲ ..။
ကျော်စွာထွန်း က သူတို့ နှစ်ယောက် ကို ပန်းမြို့တော် ဆိုတဲ့ ဟိုတယ် မှာ နေစေ သည် . .။ ပန်းမြို့တော် ဟိုတယ် သည် ရုက္ခဗေဒဥယာဉ်ကြီး ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ရှိနေတာကြောင့်..ဒီပန်းမျိုးစုံ နဲ့ သာယာလှပနေတဲ့ ပန်းခြံကြီးထဲ ကို လမ်းလျောက်ဖို့၇ာ အလွန် အဆင်ပြေလေ သည် ..။ ကျော်စွာထွန်း ကတော့ သူ့အမျိုးအိမ် မှာ တည်းခို ပြီး ..ထမင်းစားချိန်တွေ မှာ မေထိန် နဲ့ စံစံ့ကို လာခေါ်ကာ ကျွေးမွေး သည် ..။ အနီးအနား က ရေတံခွန်တွေကိုလဲ လိုက်ပို့ပေး သည် ..။ မေထိန် သည် ဒီ ပြင်ဦးလွင် ကို ရောက်လာပြီး မှ အတော် စိတ်ငြိမ်လာ သည် . .။ ပျော်လာ သည် . .။ စံစံ သည် မေထိန် ခေါ်လို့သာ လိုက်လာ၇ပေမဲ့ ဆိုင်ပိတ်ခဲ့ရတာကို သိပ် ဘ၀င်မကျလှဘူး .။ မေထိန် စိတ် အေးချမ်းလာဖို့က အချိန်ဘဲ လိုသည် . .။ အချိန်ကဘဲ ကုစားပေးလိမ့်မည် လို့စံစံ ထင် သည် ..။ ကျော်စွာထွန်း သည် မေထိန့်ကို သဘောကျနေသည်လို့ စံစံ ရောက်ကထဲက ထင်မိ သည် ..။ မေထိန့် ကို မေးကြည့်တော့ မေထိန် က ဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြောသည် . .။
ကျော်စွာထွန်း သည် အသားညိုပေမဲ့ ယောင်္ကျား ပီသပြီးကြည့်ကောင်းသော လူတယောက် လို့ စံစံ ထင် သည် . .။ အလုပ်လဲ ကြိုးစားသူ ဖြစ် သည် ။မေထိန် နဲ့ လိုက်ဖက် သည်လို့ စံစံ ထင်တာဘဲ . .။ စံစံ လဲ မေထိန်ကလဲ ကျော်စွာထွန်း ကို သဘောကျပုံရလို့ သူတို့ နီးစပ်သွားလဲ ကောင်းတာဘဲ ဆိုပြီး သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲ သွားလာ စားသောက်ဖြစ်သွားအောင် ..သူက အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြပြီး ရှောင်ပေးလေ သည် ..။ စံစံ လဲ နယူးရောက်ကိုေ၇ာ….သူတို့ ဆိုင်လေးကိုရော..ထမင်းချက် အော်ကြီး ကို ရော သတိရ အောက်မေ့နေ သည် ..။ မေထိန် သည် ညဘက် တယောက်ထဲ မအိပ်နိုင် ..။ အိပ်မက်ဆိုးများ မက်ပြီး ထထ အော်တတ် သည် . .။ ဒါကြောင့်လဲ စံစံ သူ နဲ့ လိုက်လာပေးတာ ..။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ပြန်လာလည်ရတာ တော့လဲ ကြိုက် သည် ။ သို့ပေမဲ့..ပြန်ပြီး အလုပ်လုပ်ရအုံးမည်..။ အော်ကြီး တယောက် လဲ ဘယ်လိုများ ဖြစ်နေလဲ မသိဘူး ..။ မေထိန် လဲ စံစံ က ခေါင်းကိုက် သည် ဆိုပြီး မလိုက်လို့ ကျော်စွာထွန်း နဲ့ဘဲ နေ့လည်စာ ထွက် စား သည် ..။
ပြင်ဦးလွင် မြို့ထဲ က ဆန်ဖရန်စ္စကို ဆိုတဲ့ ဆိုင် မှာ ..။ ကျော်စွာထွန်း က မေထိန့်ကို အရမ်းဂရုစိုက်သည် ..။ သူ့အလုပ်ကို ပစ်ထားပြီး ပြင်ဦးလွင် မှာ မေထိန်တို့ နဲ့ လာနေနေ သည် . .။ ထမင်းစား အပြီး ..ကျော်စွာထွန်း က သူ့ မိတ်ဆွေတွေ ရဲ့ ခြံထဲ သွားလည်ရအောင် ဆိုပြီး..မြို့ပြင် က ခြံတခြံထဲကို ခေါ်သွား သည် . .။ ခြံရှင်တွေ က စားစရာတွေ..အသီးအနှံတွေ နဲ့ ဧည့်ခံကြ သည် . .။ သူတို့လဲ အခုဘဲနေ့လည်စာ စားခဲ့ကြတာမို့ ဘာမှ မစားနိုင်ကြဘူး . . ။ စိုက်ခင်းများ နဲ့ ခြံကြီးထဲ သူတို့ လမ်းလျောက်ကြ တော့ ကျော်စွာထွန်း က မေထိန့်ကို ချစ်စကား ပြော သည် ..။ သူ အရမ်းချစ်မိနေတယ်..မေထိန် ပြန်ချစ်ရင် လက်ထပ်ပါရစေ ..လို့ ပြော သည် ..။ အလွန် သာယာတဲ့ ရှုမျှော်ခင်း နောက်ခံ နဲ့ ချစ်စကား အပြောခံရတာ ..မေထိန် သဘောကျမိ သည် ..။ သူမ အရွယ်ကလဲ မငယ်တော့တဲ့ အပြင် အမေရိကန်ပြည်မှာလဲ နေနေသူ ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့ သိပ် မဖြစ်လှ ..။ နယူးေ၇ာက် မှာ ဆိုင်ဖွင့်ထားသူဘဲ ..။ သူမကို ချစ်တယ်.ပြောတဲ့လူတွေ…ထမင်းထွက်စားဖို့ ခေါ်တဲ့ ( ဒိတ်လုပ်တဲ့) လူတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့ပြီလေ . .။
မေထိန် လဲ ကျော်စွာထွန်း ကို ငြင်းစရာ မရှိပါဘူး ..ခဏလေးတော့ အချိန်ပေးပါ..သူမ မှာ အကြောင်းလေး တခု ရှိနေလို့ပါ ..လို့ ကျောစွာထွန်း ကို ပြန်ဖြေလေ သည် ..။ မေထိန့်စိတ်ထဲ ရှိနေ တာကသူ ညည ထယောင်..အော်တတ်တာ နဲ့ စိတ်ကယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်နေတာကို လုံးဝ ပျေက်ကင်းသွားချင်သေး သည် . .။ ဒီအတွက် ကျော်စွာထွန်း ကိုလဲအသေးစိတ် ဖွင့်မပြောလိုဘူး . .။ နောက် နှစ်ရက် အကြာတွင် မေထိန်..စံစံ တို့ မန္တလေး ကို ရွှေ့ကြ သည် . .။ မေထိန် သည် ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ဆိုင်မှာ အစားအသောက် လုပ်တာတွေကို လေ့လာချင်လို့..မတတ်တာတွေ သင်ချင်လို့ ကျော်စွာထွန်း ကို ပြောတော့..ကျော်စွာထွန်း က ၀မ်းသာအားရ သိချင်တတ်ချင်တာတွေ သင်ပါ ..သင်ပေးမည် ..ဆိုပြီး မန္တလေး ကို ပြန်ကြတာ ဖြစ် သည် ..။ သက်ထား သည် အော်ကြီး နဲ့ ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီ . .။ ဆေးအသစ်…စားပွဲ..ကုလားထိုင် အသစ်တွေ နဲ့ ဆိုင် ပြန်ဖွင့်ပြီ . .။ ဆိုင် စ မဖွင့်ခင် သုံးရက် လောက် က … ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ..ပြင်ဆင်ကြတော့ သက်ထား နဲ့ အော်ကြီး ဘဲ ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုင် ကို ပြန် ရှင်းလင်း ..ဆေးသုတ် ကြ သည် . .။ ဆိုင်ထဲ နှစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ..သက်ထား က တီရှပ် ပါးပါး ..ဘောင်းဘီ အတို ပွပွလေး နဲ့ အရမ်း လှနေတော့..အော်ကြီး စိတ်တွေ ထကြွ လာ သည် . .။ ဆေးသုတ်ရင်း ..ဘောင်းဘီထဲက သူ့ငယ်ပါက ထွားတက်လာ သည် ..။ မာလာ သည် . .။ သက်ထားကတော့ ဟိုလျောက် ဒီလျောက် နဲ့ ရှင်းလင်း နေတာ တင်တွေ က တလှုပ်လှုပ် နဲ့ ..။ သက်ထား ကို ကြည့်ကြည့်ပြီး အော်ကြီး မနေနိုင်တော့ ..။ “သက်ထား ..” “အင်..ဘာလဲ..အော်ကြီး ..” “ခဏ…” “ ဘာလိုလဲ . .” “ အင်း..လိုတာကတော့ သက်ထား ဘဲ ..” “ ဘာပြောတယ်..သက်ထား ဘာလုပ်ပေးရမလဲ..ပြောလေ …” အော်ကြီး က ရုန်းထ ကြီးထွားနေသော သူ့ ငယ်ပါကြီးကို ပြ သည် . .။
“အိုး ..အော်ကြီး ကလဲကွာ..အလုပ်များနေတဲ့ကြားက ” သက်ထားမျက်နှာ က စိတ်ဆိုးဟန် မရှိ . .။ ပြုံးစိစိ နဲ့ . .။ “ လုပ်ပါဗျာ ..သိပ် အနေရ ခက်နေလို့ . .” “ ကဲ ဘယ်လို လုပ်မလဲ ..စတိုခန်းထဲ သွားမလား . .” အော်ကြီး နဲ့ သက်ထား စတိုခန်းထဲ ၀င်လိုက်ကြ သည် . .။ ပုံထားသော ဆန်အိတ်တွေ နားရောက်တော့ သက်ထား က သူ့ဘောင်းဘီ ပွပွလေး ကို ချွတ် သည် ..။ အထဲမှာ ဘာမှ ခံမထား ..။ သက်ထား ရဲ့ ပေါင်ဂွဆုံ ကို အော်ကြီး စမ်းလိုက် သည် ..။ အကွဲကြောင်းကြီး က နှုတ်ခမ်းသားထူထူလေးတွေကို ပွတ်သပ် သည် ..။ သက်ထား က အော်ကြိး လည်ဂုတ်ကိုဆွဲ နှိမ်ကာ အော်ကြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်နမ်းလိုက် သည် . .။ အော်ကြီး ရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေကို သက်ထား မြင်တိုင်း ရင်ခုံခဲ့ရတာ ..။ ဒီ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေ က ဘာဂျာကောင်းမဲ့ ပုံပေါက်နေလို့ . .။ အော်ကြီး လဲ သက်ထား တီ၇ှပ် ကို ပင့်လိပ်တင်လိုက်တော့ ဖွံ့ထွားတင်းမာတဲ့ ရင်ညှသားဖွေးဖွေးကြီးတွေ ဘွားကနဲပေါ်လာ သည် . .။ ရင်သားတွေ ကို ဆုတ်ညှစ် သည် . .။
“အို..အော်ကြီး ..သက်ထား.စိတ်တွေ ထလာပြီ ..” ၀ှူး..အော်ကြီး အမြန် ဘောင်းဘီ ချွတ် သည် ..။ သက်ထားက ဆန်အိတ်တွေ အပေါ် တက်ထိုင်ကာ ပေါင်တန်များ ကားပေး သည် . .။ အော်ကြီး လဲ အောက်ပိုင်း ဗလာ ဖြစ်သွားပြီး လိင်တန်ကြီး က မတ်မတ်တောင်နေ သည် ..။ သက်ထား အရှေ့မှာ ၀င်ရပ်လိုက်ပြီး..သက်ထားခြေထောက်တွေ ကို သူ့ပုခုံးပေါ် တင်ထမ်းလိုက် သည် . .. သူ့လိင်ချောင်းကြီး ကို သက်ထား ရဲ့ နီညိုညို အကွဲကြောင်းကြီး မှာ တေ့ကာ ထိုးသွင်းလိုက် သည် . .။ “ အင့်…အီး …တုတ်လိုက်တာ..ပြည့်ကျပ်နေတာဘဲ ..ရှီး . .. ” သက်ထား လဲ သူမ အထဲကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ၀င်ရောက်လာတဲ့ အော်ကြီး ရဲ့ လိင်တန်က သူမအတွင်းသားနုနုတွေကို ပွတ်တိုက်သွားတာမို့ တကိုယ်လုံးက အကြောတွေ ဆိမ့်သွားရအောင် ကောင်းသွား ပြီး အော်ကြီး ရဲ့ အသွင်းအထုတ်တွေကို မျက်တောင်လေးမှေးစင်းပြီး စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ အော်ကြီး လဲ ဆက်တိုက်ဘဲ အင်းကနဲ အင်းကနဲ ထိုးလိုက်ထုတ်လိုက် နဲ့ လုပ်လေပြီ . .။
“အို..အို…..ရှီးရှီး …အား…အား . ..” “ ဘာဖြစ်လဲဟင်..သက်ထား . .” “ကောင်းတယ်..လုပ်လုပ် . .” “ကောင်းလား ..” “ ကောင်းတယ်…ကောင်းတယ် . .” သက်ထား က “ ပုံစံပြောင်းရအောင် ..”လို့ ပြောလို့ အော်ကြီး သက်ထား ကို ဆန်အိတ်များပေါ်မှာ ကုန်းခိုင်းလိုက် သည် . .။ သက်ထား ဆန်အိတ်များပေါ်မှာ ကုန်းပေးပြီး အော်ကြီး တအား ဆောင့်ထည့်ပေးရင်း နှစ်ယောက်စလုံး ပြိုင်တူ ပြီးဆုံးခြင်း ကို ရောက်ရှိတက်လှမ်းသွားလေ သည် . .။ ဆက်ရန် မျှော်
0 comments on “ကြော်တတ်တယ်..လှော်တတ်တယ် (အပိုင်းတစ်)”
ကြော်တတ်တယ်..လှော်တတ်တယ် (ဇာတ်သိမ်း) →
Total visitors : 159,238
Total page view: 379,229
“ဦး လိုတဲ့ မီးငယ်”